Alvaro Arbeloa oo maamulka Real Madrid u sheegay iney lasoo saxiixdaan wiilka yar ee Lionel Messi & Sababta. – Gool FM
Alvaro Arbeloa oo maamulka Real Madrid u sheegay iney lasoo saxiixdaan wiilka yar ee Lionel Messi & Sababta.
Abdirashid Mohamud June 6, 2019
(Madrid) 06 June 2019. Lionel Messi ayaa wareysi ku sheegay in mid ka mid ah caruurtiisa uu taageero u yahay kooxda Real Madrid isla markaana uu u dabaal dagay gool ay sanadkii hore ka dhaliyeen final-ka Champions League dhigeeda Liverpool.
Leo wuxuu qiray in wiilkiisa Matteo uu goolka Real Madrid ugu dabaal dagay sabab aan caadi aheyn maadaama uu doonayay inuu ka careysiiyo walaalkiisa Thiago.
Sidoo kale kabtanka Argentina wuxuu qiray in Matteo uu mar walba ku maadeysto isaga waqtiyada guuldarooyinka ay soo wajahaan, wuxuuna tusaale usoo qaatay guuldarooyinkii Liverpool iyo Valencia.
Si kastaba haatan Alvaro Arbeloa oo ah xiddig lagu yaqaanno iney qalbigiisa dagtay ruuxiyadda Los Blancos ayaa si kaftan ah baraha bulshada ugu booriyay maamulka Madrid iney lasoo saxiixdaan Matteo maadaama uu ku farxo guuldarooyinka aabahiis iyo Barcelona.
Kaliya wuxuu twitter-ka soo dhigay: “Aan lasoo saxiixano” isagoo dadka la wadaagaya wareysiga Messi uu arrintaan kaga hadlaayo, xiddigii hore qaranka Spain ayaana soo raaciyay qosol.
Gabadhii kusoo dhex oroday garoonka final-kii Champions League - Kinsey Wolanski - oo ganaaxyo dheeraad ah dusha loo saaray.